नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह तय, को हुन् हुनेवाला बेहुला ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह तय, को हुन् हुनेवाला बेहुला ?
कोही पनि पूर्ण रुपमा ठिक नहुने भन्दै उहाँले कहिलेकाही कमजोर महशुश गरिरहेको बेलामा साथ दिने साथीको आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँको विचारमा यही नै अर्थपूर्ण सम्बन्ध हो ।
आफुले एकपटक बिहे गरेर सबै कुरा थाहा पाइसकेँको भन्दै आफ्ना लागि बिहे महत्वपूर्ण नभएको तर्क व्यक्त गर्नुभयो । अर्को बिहे आफ्नो कहिले गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो इच्छामा भर पर्ने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
छोरीहरुसँग नाचेको हिमानी शाहको टिकटक भाइरल भएपछि ‍पारसपनि मख्ख
यि हुन् अमेरिकामा ह’राएका नेपाली चलचित्रका १५ अ’भिनेत्री (भिडियो हेर्नुहोस)
चर्चित नायिका संचिता लुईटेलसँग दोस्रो विबाह गरेका चर्चित नायक निखिल उप्रेतीको काठमाडौँमा नै छ यत्रो भब्य बंगला